Taariikhdii Layaabka Badnayd Ee Halgamaa Xalane (Q1aad). Qalinkii Iyo Ururintii Cabdi Cawiye | Aftahan News
Taariikhdii Layaabka Badnayd Ee Halgamaa Xalane (Q1aad). Qalinkii Iyo Ururintii Cabdi Cawiye
Wuxuu u xusul duubayey inuu xoriyad uu ku noolaado isaga iyo dadkiisuba taasoo maanta
aan macnaheedu aad u macaanayn waayo dadka soomaaliyeed iyagaaba maanta xoriyad la’aan ku yaacaya macnaha tahriibta iyo u boqoolka dibada oo ta ugu weyn ee lagala kulmaa hahay xoriyad la’aan dhinaca diinta iyo dhaqanka wanaagsan ah.
Suaal waa maxay xoriyadu?
Afeef: wadanigu reer maaha.
Qofba sibuu u yaqaanaa maanta xoriyada iyo raaxada nolosha.
Waddaniyada xoogda badnayd iyo guubaabadii wax-garadka waxaa ka dhashay dhalinyaro naftood hurayaal ah oo wax kasta oo qaali ku ah u bixinaya waddanka , wax kastana wadanku uuga muhiim sanayahay, tusaale; Xalane waxa uu ahaa halyay soomaaliyeed , waxa uu soo arkay dhibaatada gumaysigu leeyahay , neecowda xoriyadda wuu la kowsaday , bal aan isla yara eegno taariikh kooban oo uu inooga tagay Xalane oo uu ka sheekeeyey AHUN madaxweynihii Somaliya Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlaya taariikhda Maxamed Cabdulle Xalane, wuxuu yiri
Xarunta Hargeysa ee Xalane. Iyo inHa badan xarumo Xalane loogu magac daray oo ku yaala inta badan magaalooyinka waaweyn ee soomaalida.
Markii aan ugu tagay godadka oo aan iri qaarkood: “waryaa waa adiga qaawane sidee ugu adkaysanaysaa qorraxda iyo dhaxanta?”, waxay igu jawaabeen: “waxaa i illowsiiyey dhaxanta iyo qorraxda sharafkayga iyo waddankayga iyo immaankayga; ma xanuunsanayo: adaa moodey inaan xanuunsanayee ha ka biqin meeshayda laga soo geli mahayo iyadoon maydkayga laga tallaabsan”.
Ogow geesigu marnaba ma dhinto hadii la dila magaciisaa sii noolaada immisa qof oo aan arag ayaa maanta yaqaana halgamaa Xalane
soco qaybaha dambe….
Xigasho khadar xussen
Mohamed Ibrahim Shire
Ururintii iyo Qalinkii Cabdi Cawiye